Voretra | mandimby maharo
Posted on 29 October 2012 by Mandimby Maharo
#BlackTana. Io no anarana nomen’ireo mpiserasera ilay alarobia 24 oktobra, naharakotra setroka sy rahona ny tananan’ Antananarivo iny. Herinandro nialoha an’ io dia nahatsikaritra ny rehetra fa rakotra zavona fotsy noho ny doro tanety ny Tanana, dia tsy nampoizina ihany hoe ho tonga amin’ ireny fahamaizinan’ ny andro amin’ ny 5 ora hariva ireny izany. Nifangaro tokoa manko iny hariva iny ny setroka sy ny rahon’ orana ka nanarona ny masoandro. Na dia mbola tsy ao anatin’ ny fotoam-pahavaratra aza isika eto Madagasikara dia manaraka ny fenitra iny orana iny hoy ny manampahaizana ny amin’ izany. Kilasiana ho orana mampisara-taona , mampisaraka ny ririnina sy ny lohataona hidirana amin; ny fahavaratra, iny filatsahany tampoka iny. Haharitra amin’ ity herinandro ity izany. Noho ny tsy fahalalana nefa dia maro ireo tratra ny orana. Nisy koa ireo nivadipo ka nihevitra fa fara andro. Maro noho izany ny nanome tsiny ireo mpandoro tanety. ‘Tsy manaja tontolo iainana’, hoy ny sasany. ‘Tsy mitsinjo ny taranaka’, hoy ny hafa. Samy nanakiana ireo tantsaha izay tsy mbola afaka amin’ ny fomba ratsy fampiasana ny tavy sy ny dorotanety ho fomba fanajarina tany hambolena.
Vitsy nefa ireo izay nahatsikaritra fa tsy ny setroky ny afo ihany no loto niainana tamin’ iny hariva iny. Nipoitra sy niparitaka eran’ ny arabe koa ireo fako avy any anaty tatatra. Ireo harona plastika sy taratasy avy namonosana mofo no nanentsina ireny tatatra ireny. Rano maloto sy fotaka no tsy maintsy nirobohana. Tsy teny amin’ ny faritra iva ihany no nahitana izany tondra-drano izany fa saika nanerana ny renivohitra mihintsy. Io no midika fa maloto ity Tanana ity. Efa iarahana mahita ihany nefa ireny ezaka ataon’ ny ao amin’ ny fitantananaireny: eo ny fanamboarana daba-pako vita amin’ ny vy. Nanomboka nametraka fanariam-pako vato koa izy ireo tao anatin’ ny iray volana izay. Nampiana koa ireo fiarabe sy ireo olona mpanangona ireny fako ireny. Ireo rehetra ireo dia natao mba hahatonga ny olona hanary ny fakony any amin’ ny toerana tokony asiana izany. Fako izay mahatratra 800 taonina isan’ andro no raofina eto. Ary izany indrindra no mahafeno haingana ny toby fanariana eny Andralalitra.
Porofo mitohoka amin’ ny tenda aloha hatreto fa mbola tsy manana fahazarana manary fako eny amin’ ireny toerana ireny ny mponin’ Antananarivo. Fahazarandratsy sa tsy fahaizana mandray andraikitra? Ka raha lazaina fa tsy manaja tontolo iainana sy tsy mitsinjo ny taranaka ny tambanivohitra dia aoka dia ho lazaina fa mandrora mitsilany ny tamdrenivohitra. Isika izay fa be fahalalana sy efa maharaka ny fandrosoana.